Siminaarka Xuquuqda Caruurta & Haweenka – Aid Galcad
Siminaarka Xuquuqda Caruurta & Haweenka
2015-06-29 by Deeq
Waxaa maalintii axada taariikhdu ay aheyd 28kii jun 2015ka lagu qabtay hoolka shirarka Muqdisho Guest house siminaar looga hadlaayey xuquuqda caruurta iyo haweenka deegaanada Galcad. Siminaarkaas oo ay soo agaasintay hey’ada Aid Galcad waxaa loo qabtay arday wax ka barata jaamacadaha gobolka banaadir ardayda as oo deegaan ahaan kasoo jeeda Degmada Galcad.
Furitaanka siminaarka waxaa ka hadlay Gudoomihaya Degmada Galcad Cabdiraxmaan Maxamuud Yabaroow (Garweyne), gudoomihaya oo ka hadlay qorshaha maamulka mustaqbalka degmada ee ku wajahan adeegyada bulshada, waxaa kale oow carabka ku dhuftay in loo baahanyahay siminaarada noocaan oo kale ah in loo qabto bulshada.
Intaa ka dib waxaa hadalka qaatay gudoomihaya Aid Galcad Sweden Axmed ibraahim Jimcaale (jarmal) oo ka hadlay aasaaska Aid Galcad, waxyaabihii u qabsoomay inteey dhisneyd iyo waxa ay higsaneeyso mustaqbalka.
Waxaa sidoo kale ka hadlay siminaarka intii uu socday masuuliyiin badan oo ka kala socday lamaha Aid Galcad ay ku leedahay Somalia, Norwey, iyo gudoomiyaha hey’ada Horn Afrik Association ee Finland.